Weerada nacaybka ah oo lagu hayo masaajidyada oo la baarayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hussein Mohammed Zakir, guddoomiyaha masaajidka Hallunda. Sawirle: Fernando Arias/SR
Weerada nacaybka ah oo lagu hayo masaajidyada oo la baarayo
La daabacay måndag 20 januari 2014 kl 09.49
Sannadkii la dhaafay ayaa masaajidyo iyo goobo kale oo dadyowga muslimiinta ahi ku cibaadeystaan loo gestey weerero isugu jira waxyeelooyin, xadgudub, hanjabaad iyo kharibaadyo kala duwan. Taasina waxay welwel ku abuurtay Ururada muslimka ee Iswiidhen oo hadda ku talajira in ay baaritaan qaran ku sameeyaan sawirka ammaankooda iyo khataraha ku soo wajahan.
Ururo badan oo kuwa muslimiinta ah ayaa ka hawlgala dhismayaal aysan ammaankoodu sugnayn haddii lagu soo weerar waxyeeleyn ama dab qabsado. Sidaasna waxaa tiri Helena Hummasten oo madax ka ah golaha muslimiinta Iswiidhen, muddo dheerna isku hawlineysey arrintaan. Cabsi ayeyna ka qabtaa in wax khatar ahi dhacaan:
– Waqti ayaa naga xiga inta wax halis ahi ka dhacaan ama qof nafta waayayo.
Baaritaan shan sano ka hor laga sameeyey jaamacadda Mitthögskolan waxaa lagu soo bandhigay in afar ka mid ah tobankii ururada muslimiinta loo gestey falal dembiyo ah. Sida ay qabto Helena Hummasten waxay u muuqataa in xaaladdu ay hadda ka sii dartay. Golaha muslimiinta Iswiidhen wuxuu badanaaba warar ka helaa ururada muslimiinta oo uga sheekeeya in handadaad, xadgudubyo iyo waxyeelooyin loo geysto. Waxaa goobahaas ka mid ah goob lagu cibaadesyto oo ku taal xaafadda Hallunda ee degmada Botkyrka oo uu guddoomiyaha ururku Xuseen Maxamed Zakir sheegay in dad ay caadeysteen in ay daloolka boostada ka soo ridaan waxyaalo ay ka mid yihiin:
– Nalal la burburiyey iyo mindiyo.
Intaas waxaa dheer in waxyaalo qarxa laga soo tuuray daloolka boostada, ayuu intaas ku daray Xuseen Maxamed Zakir. Sannadkii 2010 ayaa masaajidka halkaas ku yaal dhagxaan lala soo beegsaday oo daaqadaha looga burburiyey, albaabadana bannaanka looga gudbey waxyaalo si aysan dadka gudaha ku jiraa dibedda ugu soo bixin.
– Wax ammaan ah uma haysanno sidii hore.
Qaybo kale oo dalka ka tirsan ayey ka dhaceen waxyeelooyin iyo dembiyo nacayb oo la tuhunsan yahay in lagu la kacay masaajid.